Caps → Yekusimudzira zvipfeko • nyanzvi P&M yakashongedzwa yekombuta
Kushambadzira ngowani chirevo chinonakidza chekupfeka uye kushambadzira zvipfeko, iwo anozove mubatanidzwa unowirirana we T-shirts, Polo hembe kana bhurauzi. Icho chipo chevana, vechidiki uye vakuru.
Hondo gadget yakakurumbira yekusimudzira, pamwe neayo mapikicha, inowanzove chipo chevatengi nevashandi. Rudzi rwegajeti harungoshanda chete, asi runogona zvakare kuve rakakura rekushambadzira, izvo zvinowedzera kufarirwa kwechiratidzo. Chipo chinobatsira chingamutsa kushamwaridzana kwakanaka uye, semhedzisiro, chinogona zvakare kuwedzera kufarira mukambani.
Muchitoro chedu iwe unowana akawanda marudzi ehembe, ese ezhizha uye echando. Pakati pemabheji ebaseball ane visor, ngowani dzakapfava dzine brim, visors, masikisi, uye zvakare akavharirwa makapu, iwe zvechokwadi uchawana chimwe chinhu chakakukodzera.
Isu tine mhando dzepasirese uye mamodheru evana mune mashoma madiki.
Yakazvimirira chivharo dhizaini
Kufanana nembatya zhinji uye machira muchitoro chedu, makapisi anogona kutarwa nemifananidzo kana zvinyorwa. Isu tinoita zvekushongedza tichishandisa nzira kombasi yemakomputa kana kudhinda kwescreen. Kune izvi, isu tinotanga tada mutengo
kupa magirafu uye kutsanangura huwandu hwekutenderera kwekumaka,
isu tinoita visualization zvichibva pane zvakagamuchirwa mifananidzo
mushure mekubvuma kuona - tinotanga kumaka.
Tine yedu yega muchina paki, iyo inoita kuti tikwanise kupedzisa odhi nekukurumidza, kusvika kumazuva manomwe ekushanda kubva panguva iyo muripo unorumbidzwa. Isu tinoongorora yekumaka maitiro ekugadzira padanho rega rega, nekutenda kwatinokwanisa kuita nekukasira kana paine shanduko. Kuva mukutaurirana nguva dzose nemutengi, tinogona kukurumidza kuisa chero zvigadziriso.
Pfungwa dzakanaka uye boka riri kuwedzera revatengi venguva dzose rinosimbisa mhando yepamusoro yezvigadzirwa nemasevhisi. Kugutsikana kwevatengi kwakanyanya kukosha kwatiri, saka isu tinosvika kune yega odha nekutarisira kukuru.
Kuisa mapikicha ega ega kumakambani ekushambadzira kunoda mutengo wega. Izvi zvinorairwa nesarudzo yekumaka nzira, mwero wekuoma kweprojekti uye nesimba rinodiwa. Mutengo weodha unogona kuzivikanwa basa risati ratanga, kukosha kwacho kuri mahara uye hakukumanikidze kune chero chinhu. Chikwata chedu chinopa zano pane nzvimbo yekumaka, kusarudzwa kwechigadzirwa chakakodzera senzira yakasarudzwa, uye nekutenda kumakore mazhinji echiitiko, ichapindurawo iyi isiri-standard mibvunzo.
allegro cap ine chinyorwayakadhindwa kofia kofiakumhanya ngowani nekudhindamakambani emakambani ane anodhindaizere cap cap pamwe neyako yakanyorwangowani dzemubiki dzine chinyorwatsika-dzakagadzirwa makapeti ane anodhindaakadhindwa mapepa ngowanimakushe emakwai ane chinyorwakushambadzira ngowani nekudhindasnapback cap uine chako chinyorwamitambo yemitambo ine anodhindabaseball caps yevana vane zvinyorwabaseball nguwani nekudhindaevarume baseball nguwani dzakadhindwabaseball nguwani nekudhindabaseball nguwani uine chako chinyorwanguwani dzakadhindwakapu ine chinyorwa cherourongowani dzine chinyorwa chevanacap pamwe neKrakow anodhindaMakapu ane wizard anodhindambanje yekudhinda ngowanitsika-yakadhindwa ngowanimakapasi ane poznań anodhindacap neWarsaw anodhindanguwani ine visor anodhindanguva yechando yakadhindwa ngowaninguwani neako kudhindanguwani uine chako chinyorwakapu ine chako chinyorwa cherourongowani dzepachipepa nechako chinyorwanguwani uine chako chinyorwa Warsawngowani dzechirume dzevanhu nechinyorwangowani dzechando dzine anodhindangowani dzechando ine chinyorwa cherourongowani dzechando netsika yekudhindangowani dzechando neako anodhindangowani dzechando dziine yavo yakafanirwa kuporaT-shirts nemakepisi ane chinyorwa
5 / 5 ( 8 mavhoti )